စဉ့်ကိုင်ရှိရောင်းရန်မြေကွက် ၊ ခြံကွက်များ | iMyanmarHouse.com
စဉ့်ကိုင်မြို့နယ်ရှိရောင်းရန်မြေကွက် ၊ ခြံကွက်များ
စဉ့်ကိုင် | မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး
ကြော်ငြာနံပါတ် S-7648407 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ဧကရီ (အိမျ​ခွံ​မွေ အကြိုး​ဆောငျ​) ပိတ်ရန်
ရောင်းမည် စိန်တစ်လုံးသရက်ပင်၆၀၀ ပါဧကကွက်များ
ကြော်ငြာနံပါတ် S-7573505 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ရောင်းမည် တစ်ဧက သိန်း၅ထောင်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-7480860 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
092012563. 09782012563. 09962012563,092012563,09782012563,09962012563
ကြော်ငြာနံပါတ် S-7480649 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-7421289 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
မိုး ထက် မြင့် (အိမ်ခြံမြေ အကျိုးဆောင် မန္တလေး) ပိတ်ရန်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-7355120 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ရောင်းမည် တစ်ဧက သိန်း၇၅၀
ကြော်ငြာနံပါတ် S-7354999 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-7354820 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-7354671 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-7354447 အတွက် ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်